June 2018 – Page2– AsiaApps
Notch ဒီဇိုင်းတွေကို ဘယ်ဖုန်းက စတင်ခဲ့တာလဲ ???
June 22, 2018 June 22, 2018 MoonFeaturesNo Comment on Notch ဒီဇိုင်းတွေကို ဘယ်ဖုန်းက စတင်ခဲ့တာလဲ ???
iPhone X က ခုချိန်မှာ နာမည်အရမ်းကြီးတဲ့ brand တစ်ခု ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် Notch လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ အရင်ဦးဆုံး သူ့ကိုပြေးမြင်မိကြမှာပါ။ တစ်ချို့ကလည်း အခြား Android ဖုန်းတစ်ခုခုမှာ “Notch” ဒီဇိုင်းတွေ့တာနဲ့ Apple ရဲ့…
June 22, 2018 June 22, 2018 MoonFeaturesNo Comment on ဖုန်းဘက်ထရီသက်တမ်းကြာရှည်ခံအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ???
လေ့လာဆန်းစစ်ချက်များအရ မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူတွေ အဓိကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြသာနာတွေထဲမှာ ဘက်ထရီ ခဏခဏကုန်တဲ့ ကိစ္စကလည်း တကယ့်ကို ကြီးမားတဲ့ အဆင်မပြေမှုတစ်ခုလို့သိရပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် သူငယ်ချင်းတို့ကိုအခုတစ်ခေါက် ဖော်ပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ဖုန်းဘတ်ထရီကြာကြာခံအောင်ပြုလုပ်လို့ရမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာအားလုံးသိနှင့်ပြီးကြမယ့် နည်းတွေလည်းပါကောင်းပါပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်…
Galaxy S9/S9+ အတွက် Screen customize လုပ်နည်းကို ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ အလင်းပြပေးလိုက်တဲ့ Samsung
June 20, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Galaxy S9/S9+ အတွက် Screen customize လုပ်နည်းကို ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ အလင်းပြပေးလိုက်တဲ့ Samsung
Samsung ဟာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကပဲ 2018 Flagship ဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ Galaxy S9/S9+ အတွက် Screen customize လုပ်နည်းကို ဗီဒီယိုတစ်ခုဖန်တီးပြီး သူ့ရဲ့ YouTube channel မှာတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း ရှင်းလင်းအောင်ဖော်ပြပေးသွားတာကြောင့် User…
Instagram မှာ Story တွေကို screenshot ရိုက်ရင် အခြားသူ သိနိုင်မှာလား???
June 19, 2018 June 19, 2018 MoonApp NewsNo Comment on Instagram မှာ Story တွေကို screenshot ရိုက်ရင် အခြားသူ သိနိုင်မှာလား???
“Facebook profile ထဲဝင်ကြည့်တဲ့သူကို သိနိုင်မှာလား” ဆိုတဲ့မေးခွန်း အတိုင်းပဲ “Instagram မှာ story တွေကို screenshot ရိုက်ရင် post ပိုင်ရှင်သိသွားနိုင်လား”ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကလည်း IG user တွေကြားမှာ အမေးများနေတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။…
ခေါက်နိုင်/ဖြန့်နိုင်တဲ့စမတ်ဖုန်းပြုလုပ်မှု ပရောဂျက်ကို ပယ်ချလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Samsung
June 18, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on ခေါက်နိုင်/ဖြန့်နိုင်တဲ့စမတ်ဖုန်းပြုလုပ်မှု ပရောဂျက်ကို ပယ်ချလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Samsung
Samsung ဟာတော့ Display နှစ်ခုနဲ့ ခေါက်နိုင်/ဖြန့်နိုင် (Foldable) ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်း အကြောင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလက ကျင်းပခဲ့တဲ့ CES 2018 မှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ အစောပိုင်းလောက်မှာထွက်ရှိလာမယ်လို့ ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာလည်း Samsung ရဲ့…
သီချင်းနားထောင်ရတာ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ JOOX Music – Free Streaming
June 18, 2018 June 18, 2018 MoonReviewsNo Comment on သီချင်းနားထောင်ရတာ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ JOOX Music – Free Streaming
သီချင်းနားထောင်ခြင်းက လူသားတွေရဲ့ စိတ်အပန်းကို ပြေစေနိုင်တဲ့အပြင်အခြားအခြားသော မရေတွက်နိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီး ကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ သီချင်းနားထောင်ရတာကို မကြိုက်တဲ့သူလည်း အယောက်တစ်ရာမှာ ၁ ယောက်/၂ ယောက်လောက်ပဲရှိပါတယ်။ ကိုယ်က သီးချင်းနားထောင်ရတာ ဝါသနာပါနေပေမယ့် ရှာနေတဲ့…
“Takeabreak” reminder Feature ကို update အသစ်မှာပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ YouTube
June 14, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on “Takeabreak” reminder Feature ကို update အသစ်မှာပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ YouTube
“Remind me to takeabreak” feature ကတော့ app ကိုအချိန်အတိုင်းအတာနဲ့အသုံးပြုနိုင်အောင် YouTube ကဖန်တီးပေးထားတဲ့ Feature တစ်ခုဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လကျော်ကထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ YouTube app update မှာစတင်ပါဝင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။…